အဘယ်ကြောင့် Linux တွင်စီးပွားဖြစ် application များမရှိသနည်း။ | Linux မှ
အဘယ်ကြောင့် Linux တွင်စီးပွားဖြစ် application များမရှိသနည်း။
ပန်ဒိုရာ | | GNU / Linux များ, NOTICIAS, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ
အချို့သောစီးပွားဖြစ်အသုံးချမှုများရှိသော်လည်းဤရာခိုင်နှုန်းသည်အလွန်နိမ့်သောကြောင့်ခေါင်းစဉ်သည်အတော်အတန်စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းများစွာရှိပြီးဒီနေ့ငါပြောမယ့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိတယ်။ ဒီပြproblemsနာတွေကိုဒီနေ့ဖြေရှင်းပြီးရင်ငါတို့မှာနောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။
Fragmentation သည်ဤရှုထောင့်မှအဓိကပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပရိုဂရမ်မာများစွာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ငါ penultimate xorg နှင့်အဆင်ပြေစွာကစားနိုင်သည့်ဂိမ်းတစ်ခုကိုတီထွင်နိုင်သော်လည်းအခြား distro တစ်ခုတွင်မူ xorg
၏ပြproblemနာ ကှကျ ထို့အပြင်အရေးကြီးသည်မှာ spotify သည် Ubuntu အတွက် deb ကမ်းလှမ်းခြင်းသာဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမှတ်မိနိုင်သည် Fedora, ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူများသည် deb ကို rpm, tar.xz, pisi သို့မဟုတ်အခြားအရာများအဖြစ်ပြောင်းလဲရန် unorthodox tools များကိုအသုံးပြုရသည်။
ထိုအတားအဆီးကိုကျော်လွှားပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာသဘောသဘာဝရှိသောပြproblemsနာများနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ Linux တွင်အသုံးပြုသူအမြောက်အများရှိသည်။ သို့သော်နှစ်ခုသည်အမြဲတမ်းအဆုံးသတ်သွားသည်။ သူသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ဗိုင်းရပ်စ်မရှိသောကြောင့်၎င်းကိုအတွေးအခေါ်အတွက်အသုံးပြုသောအသုံးပြုသူဟုသူကပြောခဲ့သည်။
Linux ကိုအခမဲ့သုံးသောကြောင့်အသုံးပြုသူများသည် photoshop အတွက်€ / $ 100 ထက် ပို၍ မသုံးကြတော့ဘဲ Windows-style hacking သို့မဟုတ် free alternative ကိုရွေးချယ်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ အတွေးအခေါ်အတွက် Linux ကိုအသုံးပြုသူများသည်မသုံးလိုကြပေ။ လိုင်စင်အတွက်လျှောက်လွှာ (ဤအသုံးပြုသူအတော်များများရှိပါတယ်) ။
အခြေအနေကိုထည့်သွင်းကြပါစို့၊ ဈေးကွက်၏ ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိသော ၀ င်းဒိုးကိုစိတ်ကူးကြည့်ကြပါစို့၊ ၎င်းတွင်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိသည် photoshop သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှု၏costsကန်အမှန်အဘယ်သူမျှမထက်ပို6သို့မဟုတ် 7% ကြောင့်ပရိုဂရမ်ကိုဝယ်မယ်လို့နှင့်နောက်ဆုံးတော့ကြွင်းသောအရာက hack ဖို့ရှေးခယျြ, သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကုန်ကျယခုရဲ့ Linux ကိုဤရွှေ့နှင့်အသုံးပြုသူ 2% နှင့်သူတို့ 2% ၏စဉ်းစားကြကုန်အံ့သူတို့ကသာတက်ဝယ်ယူတက် ၆၊ ၇% (ငါတို့ရှိသမျှသည် developer များမဟုတ်သောကြောင့်) သည်ကုမ္ပဏီအတွက်အလွန်အမင်းကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆုံးတွင်အမြတ်အစွန်းကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောစင်မြင့်ကိုဂရုမပြုသင့်ဘဲငွေသာဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်နားလည်ထားသည့်အရာတစ်ခုခုရှိခဲ့လျှင်၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲအားလုံးအားအခမဲ့ဖြစ်သောကမ္ဘာကြီးသည်အောင်မြင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ကုမ္ပဏီများ၏စီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်တူသည်။ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုက၎င်း၏ကြယ်ပွင့်ထုတ်ကုန်အတွက်စာရွက်ကိုထုတ်ဖော်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကိုကာကိုလာ), တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလာကကူးယူရန်? ( ကုမ္ပဏီငွေများစွာဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်) ။ ဆော့ဗ်ဝဲကမ္ဘာကြီးဟာဒီဟာတွေနဲ့မကင်းပါဘူး။ စီးပွားဖြစ်ပရိုဂရမ်တွေအခမဲ့ဖြစ်ဖို့အရမ်းခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုငါတို့နားလည်ရမယ်။ လွတ်လပ်တဲ့အခြားနည်းလမ်းများတူညီတဲ့အဆင့်ကိုရချင်တယ်ဆိုရင်၊ developer များစားရန်၊ ဘဝလှူဒါန်းမှုအပေါ်တွင်သာ မူတည်၍ အလုပ်သမားတိုင်းသည်သူ၏လစာနှင့်ထိုက်တန်သည်။
ဤသူကားငါ၏နှိမ့်ချအမြင်, သောစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ် ဆော့ဗ်ဝဲအခမဲ့ဖြစ်သည်အမြတ်အစွန်းများစွာဖြင့်ငွေရှာနိုင်သောကုမ္ပဏီ၏အတွေးအခေါ်နှင့်လုံးဝမကိုက်ညီပါ။ ကုမ္ပဏီများစွာသည် Linux ကိုအာရုံစိုက်ရန်စဉ်းစားသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကိုပြောင်းလဲသင့်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ တစ်နေ့
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » အဘယ်ကြောင့် Linux တွင်စီးပွားဖြစ် application များမရှိသနည်း။
တကယ်တော့ fox တွင်မည်သူပရိုဂရမ်ရေးထားသည်ကိုကျွန်ုပ်သိပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် linux ကိုသုံးရန်ပြောသောအခါသူ၏ရိုးရိုးလေးအဖြေမှာ "သူတို့ကအခမဲ့ဖြစ်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမပေးကြဘူး" ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ငါကအမြဲ install လုပ်ဖို့အားသွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြ, အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူကတစ် ဦး တည်းသာတပ်ဆင်ထားသည်ဟုမဆိုလိုပါ, သူက applications များသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်သူတို့မှော်အားဖြင့်အသုံးပြုရန်သင်ယူကြသည်နည်းပါးလာဆိုလိုသည်မဟုတ်။
ပြီးခဲ့သည့်အပိုဒ်တွင်သင်ပြောသည့်အရာများစွာသည်လွှမ်းမိုးမှုအနည်းငယ်ဖြန့်ဝေသူအနည်းငယ်ကအရာအားလုံးသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ရှိသည်ဟုစိတ်ကူးရှိသည်။ ငွေအမြောက်အများကိုရောင်း ၀ ယ ်၍ ထည့်ဝင်သောကုမ္ပဏီများရှိသည်။ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (ဥပမာ - Red Hat) ။ ကုန်ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ရောင်းရန်သင်မလိုပါ၊ သို့သော်ထောက်ပံ့မှုအတွက်၎င်းသည်ကူညီသည်။
သင်ပြောတာကကုမ္ပဏီတွေကသူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖွင့်ဟလို့မရဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားသူတွေကသူတို့ကိုကူးယူပြီးငရဲကိုသွားမယ် ဒါပေမယ့်ငါ့အတွက်တကယ်မမျှတဘူးဆိုတာကအဲဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့အရေခြုံမှုပဲ။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲမရှိရင်တည်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ သင်ကုဒ်ကိုထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်လိုက်တယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ရန်နည်းလမ်းများနှင့်နည်းလမ်းများရှိပါသည်။ သို့သော်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြင့်သင်တတ်နိုင်လျှင်စမတ်ကျပြီး၎င်းကိုမည်သို့အသုံးချရမည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။
Amilcar၊ ထောက်ပံ့မှုအတွက်ငါတောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့အစီအစဉ်အတွက်ငွေကိုတောင်းရင်ငါဟာဒီထက်ပိုပြီး ၀ င်ငွေရဖို့အများကြီးပိုလွယ်တယ်၊ ငါတို့ဟာအရင်းရှင်ကမ္ဘာမှာရှိနေတယ်၊ ​​ငါမင်းကိုထောက်ပံ့မှုနဲ့ပရိုဂရမ်အတွက်မင်းကိုတောင်းခံနိုင်တယ်ဆိုတာသတိရပါ အလိုတော်ပါလိမ့်မယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ညာဘက်မှာရှိနေလို့ပါ။ အဲဒါဟာမမှန်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ငါ့လက်တွေကိုငါချိုးဖျက်မိနိုင်တယ်။ ဟုတ်တယ်
သင်မှန်ပါသည်၊ သို့သော်ရိုးသားရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီတစ်ခုလုပ်နိုင်သောအရာအချို့ရှိပါသည်။ သူတို့တီထွင်သမျှသည်အခမဲ့နည်းပညာများဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတွေလုပ်နိုင်တဲ့အရာ၊ အဲဒါဟာအခမဲ့ဖြစ်တယ် တစုံတခု သင့်ရဲ့ကုဒ်၏။
လာပါ၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) တစ်ခုအတွက်ကြွေးတင်နေသည်။ ရီကာဒိုဒီဂယ်လီက“ အနည်းဆုံးမင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အများကြီးလုပ်ပေးတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကိုတစ်ခုခုပြန်ပေးပါ” ဟုပြောသည်
သို့သော်လည်းငါသည်ဆောင်းပါးပိုထွက်ရန်အလွန်တိုတောင်းသော်လည်းအလွန်လွန်စွာပြီးပြည့်စုံစွာစဉ်းစားဆင်ခြင်သော၊ အလေးအနက်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ code ကိုတစ်ကိုယ်ကျင့်တရားတာဝန်လွှတ်ပေးရန်
ပြနာမှာကျင့်ဝတ်နှင့်ဆိုင်သောတာဝန်များရှိသောကုမ္ပဏီများသည် XD မှရယ်မောခြင်းဖြစ်သည်
မင်းကိုဒီလိုခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အတွက်အမြဲတမ်းမင်းနေခွင့်ပေးပါ။ မင်းကငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းရှိခဲ့တဲ့အမြင်တွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြလို့မရဘူးဆိုတာကိုအက္ခရာဖြင့်စာဖြင့်သေသေချာချာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဂုဏ်ပြုလွှာများကလူအများစုသဘောမတူနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိသော်လည်းသင်ဤအခြေအနေ၏အဖြစ်မှန်ကိုပိုမိုရှင်းလင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဟုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ပါသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ pandev92 သင်ပြောသောအရာအချို့ကိုကျွန်ုပ်သဘောမတူနိုင်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစိတ်အပိုင်းများဖြင့်သွားသည်
Fragmentation သည်ဤရှုထောင့်မှအဓိကပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပရိုဂရမ်မာများစွာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ငါသည် penultimate xorg နှင့်အဆင်ပြေသောဂိမ်းတစ်ခုကိုတီထွင်နိုင်သော်လည်းအခြား xorg ရှိသည့်အခြား distro တစ်ခုတွင်
ဒါကလုံးဝဆွေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် application ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ပေါ်လာသည့်အခါ (ကိုးကားချက်များကိုသတိပြုပါ) ၎င်းသည်အဟောင်းများအတွက်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်သီအိုရီအရ Xorg 7.0 တွင်အလုပ်လုပ်သောအရာ (ဥပမာ) Xorg 7.1 တွင်အလုပ်လုပ်သင့်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင်ဤအကြောင်းပြချက်သည်အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ အမြဲတမ်းကစားပွဲကိုအမြဲတမ်း update လုပ်နိုင်ပါသလား။ သင်ငွေတောင်းခံလျှင်ပင်သင်အမြတ်ရနိုင်သည်😀
ထုပ်ပိုးခြင်းပြproblemနာသည်လည်းအရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး spotify သည် Ubuntu အတွက် deb ကမ်းလှမ်းခြင်းသာဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမှတ်မိနိုင်ပြီးသူတို့နားလည်သဘောပေါက်ထားသည့်အတိုင်း fedora အတွက် rpm ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမပြုတော့ဘဲသုံးစွဲသူများသည် deb ကို rpm သို့ပြောင်းလဲရန်မorthodox tools များကိုအသုံးပြုရသည်။ , tar.xz, pisi သို့မဟုတ်သမျှ။
ဒါဟာပြaနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဖန်တီးသူသည် tarballs များကိုပေးပြီးထောင်နှင့်ချီသောအပလီကေးရှင်းများနှင့်အတူဖြစ်သကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောဖြန့်ဝေမှုများက၎င်းကိုထုပ်ပိုးရန်ဂရုစိုက်သည်။
ဒါကနောက်ပြissueနာတစ်ခု။ ဒါကသုံးစွဲသူအပေါ်မူတည်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ OS အတွက်မရရှိနိုင်သည့် Photoshop ကဲ့သို့သောကိရိယာများရှိသောကြောင့် Linux သုံးစွဲသူများစွာသည် Windows ကိုအသုံးပြုရသည်။ သင်ရွေးချယ်ထားသည့် OS တွင်သူအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောကိရိယာရှိရန်ဤသုံးစွဲသူသည်ငွေမပေးနိုင်ဟုသင်အမှန်တကယ်ထင်ပါသလား။ ဥပမာအားဖြင့်ဒီဇိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသူများနှင့် Linux ကိုသုံးသောလူအများတို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိရိယာများရရှိရန်ငွေပေးချေလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
ဤဥပမာ၏ဥပမာမှာ Nero Linux ဖြစ်သည်။ Linux ရှိ Windows မှ Nero တူညီသည်။ များစွာသောသူတို့သည်၎င်းကို hack လိမ့်မည်မှာမှန်ပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အချက်နှစ်ချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ (K3B, Brasero, Xfburn) အဓိကအချက် - အကယ်၍ သင်၏ beans သည်၎င်းကိုမှီခိုပါကသင်အကြိုက်ဆုံး OS တွင်လိုအပ်သောကိရိယာများကိုယူရန်သင်ပေးလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ကျွန်တော်နားလည်ထားသည့်အရာတစ်ခုခုရှိလျှင်၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲအားလုံးအားအခမဲ့ဖြစ်သောကမ္ဘာကြီးသည်အောင်မြင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါကဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ကုမ္ပဏီများ၏စီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်တူသည်။ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုက၎င်း၏ကြယ်ပွင့်ထုတ်ကုန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုထုတ်ဖော်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ ဥပမာ - တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်၎င်းကိုကူးယူရန်အတွက် (ကုမ္ပဏီသည်ငွေအမြောက်အမြားဆုံးရှုံးမည်) ။
Coca Cola သည် GPL ကဲ့သို့သောလိုင်စင်အချို့အောက်တွင် ၄ င်း၏စာရွက်ကိုလွှတ်လိုက်သည်ဆိုပါစို့။ အဆိုပါစာရွက်နေဆဲသူတို့ပါပဲ။ အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကအလားတူကူးယူပါက၎င်းသည်မည်သည့်နေရာမှမည်သည့်နေရာတွင်ရောက်ရှိသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းသည်မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်သည်ကိုအစီရင်ခံရမည်။
ဤနည်းအားဖြင့်ကိုကာကိုလာသည်အကျိုးရှိသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုတွေ့ရှိပါကယခင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူကအမြဲတမ်းအနိုင်ရမှာလဲ။ Coca Cola ၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်ထုတ်ကုန်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ငါပို။ ပင်ဥပမာတစ်ခုပေးပါ။ ဘာကြောင့်အသုံးပြုသူများသည် Chrome နှင့် SRWare Iron ကိုမသုံးကြသနည်း။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Chrome ကပိုပြီးဆိုးတာပေါ့။ Nope, သူတို့ကဒါထွက်ထွက် privacy ကိုအရာအဘို့ပြုပါ။ အကယ်၍ Chrome တွင်မည်သည့် forks မည်မျှပင်ရှိပါစေ၊ သုံးစွဲသူများသည်မူရင်း၊ ဂုဏ်သတင်း၊ လူသိရှင်ကြား၊ အထောက်အပံ့စသဖြင့် Chrome ကိုအသုံးပြုရန်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ သူတို့သည်“ အရည်အသွေး၊ လုံခြုံမှု၊ အာမခံချက်၊ ကြာရှည်ခံမှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုစသည်တို့ကိုစဉ်းစားသည်”
Nero တွင်ပြsomethingနာတစ်ခုသည်အသစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည် (ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်မှာ Linux အတွက်ဖြစ်သည်)
အခြားရွေးချယ်စရာများရှိလျှင် Nero Linux ကို hack ရန် oligophrenia ၏လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည် K3b သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး Nero နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်
ba ka ဟုခေါ်သည့်ဖိုရမ်တစ်ခုကိုသင် ၀ င်ပါက neoro linux ကို hacked လုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်တွေ့လား။ သငျသညျကိုယျ့ကိုယျကိုငါ့ကိုအခြား application ကိုအသုံးမပြုမီနှင့်ဒါကြောင့်အခြားထောင်ပေါင်းများစွာ၏အရာနှင့်အတူဖြစ်ပျက်မတိုင်မီငါ့ကိုပြောပြနေကြသည်။
Brasero သို့မဟုတ် K3b ကို install လုပ်ရန် terminal ထဲရှိရိုးရှင်းသော command တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ရိုက်ထည့်နိုင်သည့်အခါကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုရှုပ်ထွေးစေခြင်းမှာအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။
ဒါကလုံးဝဆွေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်လျှောက်လွှာအသစ်ဗားရှင်းဖြန့်ချိသောအခါ (ကိုးကားချက်များကိုသတိပြုပါ) ၎င်းသည်အဟောင်းများကိုအင်္ဂါရပ်များအတွက်ထောက်ပံ့သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်သီအိုရီအရ Xorg 7.0 တွင်အလုပ်လုပ်သောအရာသည် (ဥပမာ) Xorg 7.1 တွင်အလုပ်လုပ်သင့်သည်။ ဆိုလိုတာကတော့ဒါကအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူး၊ ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဂိမ်းကိုအမြဲတမ်း update လုပ်လို့ရနိုင်မလား။ သင်ကအားသွင်းရင်တောင်အဲဒီကနေအမြတ်ရနိုင်တယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပါ၊ Linux ၌သင်နှစ်ခုကိုသုံးခုတစ်ကြိမ်ပြောင်းသည်။ ကဒ်ဒရိုင်ဘာကိုမွမ်းမံရန်ပြုလုပ်သောလူကြီးလူကောင်းများနှင့်ဂိမ်း developer များကို ၀ င်းဒိုးတွင်မည်သည့်အရာမျှပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောကြောင့်စောင့်ဆိုင်းနေရမည်။ အဲဒီပြissueနာကသူတို့ဟာ bug fix တွေလုပ်ပြီး ၂-၃ နှစ်တိုင်းတစ်ကြိမ် sp ပို့ပေးသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲ (တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းကိုအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်တွင်ကျွန်ုပ်တွေ့ဖူးသေးသည်) tarballs တွင်မဖြန့်ဖြူးသော်လည်း၊ ကြိုတင်စုဆောင်းထားသည့် package များ၌၎င်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။
ငါပို။ ပင်ဥပမာတစ်ခုပေးပါ။ ဘာကြောင့်အသုံးပြုသူများသည် Chrome နှင့် SRWare Iron ကိုမသုံးကြသနည်း။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Chrome ကပိုပြီးဆိုးတာပေါ့။ Nope, သူတို့ကဒါထွက်ထွက် privacy ကိုအရာအဘို့ပြုပါ။ အကယ်၍ Chrome တွင်မည်သည့် forks မည်မျှပင်ရှိပါစေအသုံးပြုသူများသည်မူရင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ကြော်ငြာ၊ အထောက်အပံ့စသဖြင့် Chrome ကိုအသုံးပြုရန်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်ပေးဆပ်သည့်အခါ။ သူတို့သည် "အရည်အသွေး၊ လုံခြုံမှု၊ အာမခံမှု၊ ကြာရှည်ခံမှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုစသည်တို့ကို" စဉ်းစားနေကြသည်။
မင်းကြည့်ရတာမြင်ပေမဲ့ငါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုလေ့လာတယ်။ ငါပြောတာကကိုကာကိုလာဟာသူတို့ရဲ့ပုံသေနည်းကိုသိတဲ့သူကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘူး။ လူတွေကဂရုမစိုက်ကြဘူး၊ ကိုကာကိုလာပါ၊ သူတို့ကအတူတူပဲအရသာရှိတဲ့ဈေးအပေါဆုံးထုတ်ကုန်ကို ၀ ယ်ဖို့ပိုကြိုက်ကြလိမ့်မယ်။ မင်းငါ့ကိုနားလည်ရင်ငါမသိဘူး။ ထို့နောက်ကိုကာကိုလာသည်ဈေးကွက်၏ ၆၀-၇၀% ကိုဆုံးရှုံးပြီး ၂၀ သို့မဟုတ် ၃၀ တွင်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်မည်မျှတီထွင်သည်ကိုအရေးမကြီး။ အခြားသူများကကူးယူနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည်ငွေရှာရန်ဖန်တီးခဲ့ကြသည် (၎င်းသည်သူတို့၏အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်၊ ဒုတိယသည်ဖောက်သည်ကိုကျေနပ်စေရန်ဖြစ်သည်) ထို့ကြောင့်သူတို့သည်စျေးကွက်တွင်သီးသန့်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုမိုက်မဲခြင်းမရှိကြပါ။ ၎င်းသည်ယုတ္တိရှိပြီးရိုးရှင်းသောကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုဖြစ်သည်။
ခင်ဗျားပြောခဲ့သလိုပဲကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကငွေရှာဖို့နဲ့ဒုတိယဖောက်သည်ကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့ပါ။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုဖွင့်လိုက်တာပါပဲ။ အခုတော့အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ ၀ င်ငွေနည်းနည်းပဲရတယ်။ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်သုံးစွဲသူများနှင့်ကိုက်ညီရန်အပလီကေးရှင်းများ၊ ပရိုဂရမ်များ၊ ဂိမ်းများနှင့်အခြားသူများကိုကမ်းလှမ်းသောဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အခမဲ့မဟုတ်၊ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဒါကိုအားသွင်းဖို့အတွက်ဆက်လုပ်ပါ။ နဖူးလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းရှိတဲ့လူအများစုကဘယ်လိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာသိကြလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီကြီးများသည်ဖောက်သည်များရှေ့တွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထည့်သွင်းနေသမျှကာလပတ်လုံးအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသည်အနိုင်ရလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ပါကမိမိဆန္ဒအလျောက် Firefox သို့မဟုတ် google သို့ယူရို ၅၀ (ဤနှုန်းသည်ကျွန်ုပ်၏လစာပေါ် မူတည်၍ ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်သို့မဟုတ်နိမ့်နိုင်သည်) ကိုဆန္ဒအလျောက်လှူဒါန်းလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Microsoft ကပိုက်ဆံအများကြီးပေးရမယ် (သို့) ဒီထက်ပိုပြီးပိုက်ဆံပေးရမယ့် Browser ဆိုတာရှိတယ်။
တစ်နေ့မှာမင်းပြောနေတာတွေပြည့်စုံလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လူသားတွေဟာတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေကြရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပ်မသေချာဘူး၊ လာမယ့်နှစ်တွေမှာမြင်တွေ့ရ ဦး မှာပါ။
ကုမ္ပဏီများသည်ဆက်လက်ဝင်ငွေရကြလိမ့်မည်၊ ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်မှာစီးပွားရေးပုံစံဖြစ်သည်။ Coca-Cola ဟာလျှို့ဝှက်ဖော်မြူလာကိုပုန်ကန်ရန်မဟုတ်သည့်နေရာဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ပြီးတော့အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် Cola ရဲ့စားသုံးမှုဟာဆက်ပြီးတည်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကုမ္ပဏီအများအပြားကဖုံးအုပ်နိုင်မှာလားဒါမှမဟုတ်အခြားအချိုရည်များမှာပါ ၀ င်မှာဖြစ်ပြီးအခြားကုမ္ပဏီများကနေ ၀ င်ငွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှု။ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သော်လည်းအဆင့်အားလုံး (စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးစသည်) တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစျေးကွက်ဝေစုကိုမည်သည့်အခါမျှသိမ်းဆည်း။ မရပါ။ အရင်းအနှီးပြန်ရရှိမှုကျဆင်းသွားနိုင်သော်လည်းအချို့သည်ဝင်ငွေရရန်လိုအပ်သည်။ မစ္စတာဂိတ်စ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့မဟုတ်အက်ပဲလ်ကဲ့သို့သောသူများသည်ထိုကဲ့သို့သောငွေနှင့်စွမ်းအင်ပမာဏကိုစုဆောင်းခြင်းသည်မည်မျှအထိကောင်းသည်။ နှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းအများကြီးပိုဆိုးဖြစ်ကြသည်။ လက်ဝါးကြီးအုပ်သူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်ရယ်စရာဖြစ်ကြသည်။
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လှုပ်ရှားမှုသည်ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့စဉ်ကကဏ္ in ရှိကုမ္ပဏီများအားလုံးသည်သူတို့၏ဘဝများ၌ရှိသကဲ့သို့ကာကွယ်ထားသောပုံသေနည်းတစ်ခုဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအားပရော်ဖက်ရှင်နယ်စျေးကွက်သို့ရောင်းချခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ထိုကဲ့သို့ဖော်မြူလာများရေးသားခြင်းအပေါ်မှီခိုခြင်းနှင့်၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အစိတ်အပိုင်းကောင်းတစ်ခုအပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကုမ္ပဏီငယ်လေးအချို့သည်ဖောက်သည်များအားလုံးကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ဖော်မြူလာကိုဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ကွဲပြားခြားနားသောစီးပွားရေးပုံစံတစ်ခုအားသစ္စာခံသော ufff သူငယ်ချင်းများကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ ဈေးကွက်ထဲမှာတော်လှန်ရေး။ Ehhhh, ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်တော်ဘ ၀ ကိုပြောပြမယ့်အကြောင်း၊ ဘာလုပ်မလို့လဲ၊ စီးပွားရေးမော်ဒယ်ကအောင်မြင်တယ်၊ ဒီကနေ့ကဈေးကွက်ကိုအမိန့်ပေးနေတာပါ။ သင်ဆက်လက် ၀ င်ငွေရနေသော်လည်း၊ အခြားတစ်နည်းဖြင့်၊ အချို့သောခေတ်၏အမြတ်အစွန်းများများကြောင့်မနေရန်၊ မနေရန်၊ နေထိုင်ရန်နှင့်ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ရန်မလိုအပ်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖော်မြူလာများအတွက်တာဝန်ရှိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုလိုအပ်သည်။ ဖြစ်ပျက်မှုတစ်ခုမှာပျောက်ဆုံးနေသောနေရာ၊ ယခုတွင်သုံးခု ရှိ၍ တစ်ခုသည်တန်ဖိုးမရှိသောအရာများကိုစွဲချက်တင်ထားခြင်း၊ ယခုသူတို့အားသွင်းသည့်အရာနှင့်ဝင်ငွေပိုမိုရရှိခြင်းနှင့်ပိုမိုအရည်အချင်းပြည့်မှီသောအလုပ်များဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့အတူငါကြီးကျယ်တဲ့ထုတ်လုပ်သူ (သို့) သေးငယ်တဲ့သူအမြောက်အများဟာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို linux တပ်ဆင်ပြီးရောင်းလိုက်ရင်စျေးကွက်ကတုန့်ပြန်မယ်ဆိုရင်တခြားထုတ်လုပ်သူတွေထက်ကြီးမားတဲ့အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ထုတ်လုပ်သူကိုယ်တိုင်အတွက် samsung လက်တော့ပ်ပေါ်တွင် ၀ င်းဒိုးတပ်ဆင်ရန်မည်မျှကုန်ကျသနည်း။ ဥပမာ။ စားသုံးသူသည်အဘယ်ကြောင့်ပေးရသနည်း။ ထုတ်ကုန်တစ်ခု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဘာကြောင့်ပေးဆပ်ရပါမည်၊ သို့မှသာနောက်ပိုင်းတွင်သူမဖြစ်နိူင်ပါ။ သို့သော်ထိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မည်သူပေးရသနည်း။ ငါအိမ်ဆောက်။ ငါ့အဘို့အစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲရန်ဗိသုကာပညာရှင်ကိုငှားလျှင်၊ အဘယ်သူ၏အကြံအစည်ဖြစ်သနည်း။ သူ့ကိုသို့မဟုတ်ငါ့ထံမှ။
Redhart ကဖြစ်နိုင်လျှင်အဖြစ်ယနေ့၏ရည်ညွှန်းသည်။ အဲဒါဟာတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းလည်းမဟုတ်၊ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။
စျေးကွက်အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ၊ ကုမ္ပဏီများသည်ငွေရှာရန်မည်မျှလျင်မြန်စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်တူညီသော၊ ခေတ်နှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှု၊ သို့သော်အသက်တာ၏တရားပေတည်း။
Esmorga သည်ငါပြောသမျှအားလုံးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လွှမ်းမိုးထားသည့်အရင်းရှင်စနစ်နှင့်လစ်ဘရယ်စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်၊ Tito Bill ကဲ့သို့လူများသည်အလွန်များပြားသော ၀ င်ငွေများရရှိသည်မှာမှန်ပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်ငါယုံမှားမည်။ ကာလတိုပြောင်းလဲမှု၊ ဖြစ်နိုင်သည် (ကာလ ၄၀ မှ ၅၀ အထိ) ဖြစ်နိုင်သည်။
မင်းကြည့်ရတာမြင်ပေမဲ့ငါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုလေ့လာတယ်။ ငါ Coca Cola ကိုကော်ပီကူးလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့စာရွက်ကသူတို့ဆီကလာတာလို့ပြောရင်ငါကထုတ်ကုန်ထက်ဝက်ကျော်စျေးသက်သာတယ်၊ လူတွေကဂရုမစိုက်ကြဘူး၊ ကိုကာကိုလာပါ၊ သူတို့ကအတူတူပဲအရသာရှိတဲ့ဈေးအပေါဆုံးထုတ်ကုန်ကို ၀ ယ်ဖို့ပိုကြိုက်ကြလိမ့်မယ်။ မင်းငါ့ကိုနားလည်ရင်ငါမသိဘူး။ အဲဒီနောက်ကိုကာကိုလာဟာဈေးကွက်ရဲ့ ၆၀-၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုဆုံးရှုံးပြီး ၂၀၊ ၃၀ မှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တီထွင်မှုဘယ်လောက်အရေးမကြီးဘူး၊ အခြားသူတွေကကူးယူနိုင်တယ်။ ကုမ္ပဏီများသည်ငွေရှာရန်ဖန်တီးခဲ့ကြသည် (၎င်းသည်သူတို့၏အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်၊ ဒုတိယသည်ဖောက်သည်ကိုကျေနပ်စေရန်ဖြစ်သည်) ထို့ကြောင့်သူတို့သည်စျေးကွက်တွင်သီးသန့်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုမိုက်မဲခြင်းမရှိကြပါ။ ၎င်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးရိုးရှင်းသောကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုဖြစ်သည်
ငါမှန်ကန်ရာကိုသင်ကောင်းစွာမဖတ်ခဲ့သလော။ ဒါကလိုင်စင်အဘို့တည်ရှိတယျ။ သငျသညျမလိုက်နာလျှင်, သင်တရားစွဲမှုအတွက်တစ်သန်းပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်။ ငါလိုင်စင်ပေါ်တွင်တင်ဘာကိုထပ်မံဖတ်ပါ။
Elav ကိုကြည့်ရအောင်၊ ငါထပ်ဖတ်ပြန်တယ်၊ ကိုကာကိုလာကိုဘယ်လိုအစာကျွေးမလဲဆိုတာကိုငါဘယ်မှာရခဲ့သလဲဆိုတာသတင်းပို့တာလား။ အများဆုံးမှာသူတို့ကသူတို့လိုင်စင်နဲ့ ၀ င်ငွေရနိုင်မယ်၊ ဒါကြောင့်သင်စာရွက်ကိုသုံးနိုင်တယ်၊ သုံးစွဲသူဖောက်သည်ငါကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်အခြားတစ်ခုမှကူးယူကြောင်းကိုသင်သိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဈေးအပေါဆုံးဝယ်သည်ကိုသိလျှင်ငါဂရုမစိုက်ပါ။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ mobile xd နှင့်မှတ်ချက်တစ်ခုပြီးသားပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ
အခမဲ့ငွေပေးချေခြင်းအစီအစဉ်များအကြောင်းပြောရမယ်၊ နောက်တစ်ခုကပိတ်ထားသောငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်များအကြောင်း ...
စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲ (ငွေပေးချေရန်အတွက်ပိတ်ထားခြင်း) များစွာရှိသည်၊ ရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခုမှာ Oracle DB, Oracle App နှင့်သူတို့၏ကျန်မိသားစုများဖြစ်သည်။ Synmatec တွင် Linux server နှင့် workstations များအတွက် backup agent များရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Avast4Linux antivirus ရှိတယ်။ ငါအမည်ကိုမအောက်မေ့သော CAD ဆော့ဝဲလ်ရှိသည်။ ဥပမာများစွာသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးတပ်ဆင်မှုများတွင်အသုံးပြုခြင်းကို၎င်းတို့ရုံးသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများတွင်အသုံးမပြုဟုမဆိုလိုပါ။
ပုံမှန်မဟုတ်သော ConvertXXXtoXXX Win Deluxe ကဲ့သို့သော faux ဆော့ဝဲလ်များသည်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Linux ရှိဤပရိုဂရမ်များသည်အလွန်အမင်းပိုကောင်းတယ်၊ မလိုလားဘူး၊ ၀ င်းဒိုးတွင်သင် crack (သို့) ပေးရလိမ့်မည်ဟုမပြောခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ Linux ကိုအခမဲ့အခါ။
သူတို့မပေးသောအရာများတွင် pfffff သည်နောက်ဆုံး HumbleBundle ကိုစစ်ဆေးသည်၊ ကိစ္စရပ်အားလုံးတွင် Linux သုံးစွဲသူများသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အများဆုံးပေးချေသောသူများဖြစ်သည်။ ငါကိုယ်တိုင်ဘာမှမဝယ်ဖူး၊ ငါ HB3 HBFS နှင့် HB4 ကိုဝယ်ခဲ့သည်။
PS: နိဂုံးချုပ်မချမှီ၊ သင်က Linux ကိုနှစ်သက်သောအရာအားလုံးကိုအခမဲ့သိစေရန်နှင့်အရာအားလုံးကိုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုလိုသူကိုသာမဟုတ်ဘဲသွင်ပြင်လက္ခဏာအားလုံးကိုကောင်းစွာသိရန်လိုအပ်သည်။
ကြည့်ရအောင်၊ ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့ပြီးပြီ၊ ဒါကြောင့်ထပ်မံရှင်းပြစရာမလိုတော့ဘူး။ စီးပွားဖြစ်ပရိုဂရမ်များအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ စီးပွားဖြစ်ဟုဆိုလိုသည်မှာလူအများစုအသုံးပြုသောပရိုဂရမ်များသည်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သည်၊ ကမ္ဘာ့ကွန်ပျူတာသုံးစွဲသူများ၏ ၁% အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသော CAD ဖြစ်သည်။ Nero suite၊ Adobe suite အပြည့်အစုံ၊ sam broadcaster ကဲ့သို့သောအလွန်ပြည့်စုံသောရေဒီယိုအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
ယူရို ၁၅၀ တန်တဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို ၀ ယ်တာနဲ့ယူရို ၁၀ ယူရိုသုံးခုဝယ်တာနဲ့ကျွန်တော့်ကိုမနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။
သေချာတာပေါ့, စီးပွားရေးတစ်ခု run ဖို့ Oracle က suite ကိုအပြည့်အဝ 150 ကျိုးနပ်သည်။ သင်၏အိမ်အပြင်ဘက် Linux ကိုသိကျွမ်းလာသောအခါသင်ပြောနေသည့်အရာအကြောင်းသင်မသိပါ။ Bye '»
အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောဥာဏ်ပညာနှင့်နားလည်မှုကိုအထောက်အကူပြုသောသင်၏မှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဤအတိုင်းဆက်လုပ်ပါ။ ဒီမှာငါတို့မင်းကိုစောင့်နေမယ်။
Photoshop CS တန်ဖိုးသည်ယူရို ၁၀၀၀ ထက်ပိုသော၊ မွန်ဂိုလီးယားကိုမည်သူဝယ်သည်ကိုကြည့်ရအောင်
အဲ့ဒါနဲ့ပဲပဲဝင်ငွေရသူမွန်ဂိုလီ .. ရဲရဲရင့်တယ်၊ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေဒီလိုရင့်ကျက်မှုတွေနဲ့ခေါ်ဆောင်လို့မရဘူး။
ငါမည်သူမဆို၏သူငယ်ချင်းမဟုတ်သလိုကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းလည်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သူ၏အကြီးအကဲများ hahahahaha ၏နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းကိုခံနေရသည့်ရိုးရှင်းသောအယ်ဒီတာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
elav oO လျှို့ဝှက်ခြင်းတွင်ရဲစွမ်းသတ္တိရှိရန်သင်ဘာလုပ်သနည်း: S?
သာမန်အသုံးပြုသူသည်၎င်းကို ၀ ယ်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းစပိန်ရှိကုမ္ပဏီများကအနည်းဆုံး ၀ ယ်ကြလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် sgae ဖြတ်သန်းသွားသည်ကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်
လူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အရာတွေရှိတယ်။ မင်းမိန်းမတွေရဲ့စဉ်းစားပုံကမွန်ဂိုလိုထင်တယ်၊ မင်းပြောတာ၊ သူတို့စဉ်းစားတွေးခေါ်တာပဲ ... ငါသဘောမတူဘူး၊ မင်းရဲ့ကလေးဆန်တယ်၊ မင်းရဲ့ထင်မြင်ပုံကိုငါလေးစားတယ်။ လူတိုင်းတွင် ၄ င်းတို့၏အမြင်ရှိသည်၊ ၎င်းကိုလေးစားခြင်းသည်ဝေဖန်ခြင်းထက် ပို၍ စမတ်ကျသည်
ဟုတ်တယ်၊ သူမမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကြောက်စိတ်ဟာမွန်ဂိုပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ သူနားထောင်တဲ့ဂီတဟာမွန်ဂိုလိုပဲထင်တယ်၊ (သူမတွေ့ဖူးသေးပေမဲ့) သူဝတ်ဆင်ပုံကမွန်ဂိုဖြစ်လိမ့်မယ်၊ သူ့ကိုအမှန်တရားချစ် xD
ကျွန်ုပ်သည်မွန်ဂိုလူမျိုးများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်
av လဗာ Dixit: “ …ဒါကြောင့်ငါတို့သူ့ကိုချစ်တာကိုရပ်ပစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ xD »
ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ပါသည်, ရဲစွမ်းသတ္တိ အရာအားလုံးကြားမှသူတစ် ဦး ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောကလေးကဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ဟဲဟဲ…သူကငါတို့ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးဆိုးဆိုးဝါးဝါးအိမ်ရှင်နဲ့နှင်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်…။ သူတကယ်နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ကလေးပဲလို့ငါထင်တယ် ^ _ ^ …။ သူကမသိဘူး (သို့) ဖော်ပြချင်တယ်😀
တစ်ချိန်ချိန်သူမသူ့ကိုသံသယ LOL "မိမိအအာရုံထဲသို့လာ" စေမည်သူကိုတွေ့လိမ့်မည် !!!
ငါနှင့်သဘောမတူရန်သင်၏အငြင်းအခုံမှာသင်၌ရည်းစားမရှိလိုခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့နောက်လူများသည်အိုးထဲမှ piss နှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားကြသည်။
လာပါ၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိရင် Photoshop ၀ ယ်တာနဲ့မပတ်သက်ဘူးလားမသိဘူး။
တိုတိုတိုသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ပိုစတာများ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကပြောသည်။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့? ဆိုးတာကငါ့ကိုတကယ်မသိဘူး၊ သင်ကစကားပြောတာကိုပျော်နေရင်တောင်မှမိုက်မဲမှုကိုသင်မြန်မြန်ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့တယ်။
ကြည့်ကြရအောင်၊ သင်မှာမရှိဘူးဆိုရင် Photoshop ကိုသုံးဖို့စကားမပြောနိုင်သောခြေလှမ်းပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမမှားရင်ဒေါ်လာ ၃၉၉ တန်တဲ့ update တစ်ခုပါ။
Gimp (သို့) Krita ကိုသုံးဖို့ကုမ္ပဏီတွေကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်မယ့်အစား dammit လုပ်တယ်။ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ပြballsနာတွေကကုမ္ပဏီတွေက Photoshop အတွက်ငွေမပေးနိုင်ဘူး။
Elva, Gatico mojao မှာ VLC ကိုသုံးရန် codec မရှိပါကသင်၏ inbox ထဲတွင်သတို့သမီးများနှင့် ပတ်သတ်၍ အဖြေရှိသည်။
၎င်းကိုအသုံးပြုသောသုံးစွဲသူများသည် operating system ကိုကြိုက်နှစ်သက်။ ၎င်းသည်အခြားမည်သည့်အရာထက်မဆိုပိုမိုထိရောက်မှု၊
ငါက * အကြီးမားဆုံးအသုံးပြုသူနှစ်မျိုး * အကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းငါလုပ်ပြီထင်ပါတယ်။
အချက်အလက်ကောက်ယူသောအငြင်းအခုံကြီးတစ်ခု…မျှော်လင့်ပါ၊ စိတ်မကောင်းပါ၊ ထိုနိဂုံးသည်လေနှင့်ပြုလုပ်ထားသောရဲတိုက်ဖြစ်သည်။
အနည်းဆုံးတော့အကြံပေးချက်အရသင်ခုခံကာကွယ်မှုကိုမရနိုင် (ယခုသင်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုပြောလိမ့်မည်) နှင့်ဒုတိယအခြေခံကျတဲ့အရာတစ်ခုခု -
သင်သည်တစ်စုံတစ်ရာကိုအတည်ပြုလျှင်၊ ၎င်းကိုသက်သေပြပါ။ လူအများစုအသုံးပြုသူနှစ်မျိုးသာရှိသည်ဟုသင်ဆိုပါက၎င်းကိုသက်သေပြပါ (ဒေတာ၊ စစ်တမ်းများ ... ) သင်အငြင်းအခုံမလုပ်နိုင်လျှင်အနည်းဆုံးဆင်ခြင်ပါ။ (သင်နိဂုံးချုပ်လိုက်သည်ဟုသင်သတိပေးပါသည်) ။ ပုဂ္ဂလဒိive္ဌာန်မကျသည့်စိတ်စွန်းကွက်မှုများအရ Linux သုံးစွဲသူများသည်ကြီးမားသောကြီးမားကျယ်ပြန့်မှု၏အူအတွင်းနေထိုင်သောစတုတ္ထအတိုင်းအတာဖြင့်ဂြိုလ်သားများဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်အတည်ပြုနိုင်သည်
“ လူသည်ထင်ယောင်ထင်မှားပြုခြင်းဖြင့်နေထိုင်သည်” ဟုဖြေခြင်းသည်ရှည်လျားသည်စသည်တို့သည်ရှည်လျားသောစသည်တို့တွင်ရှည်လျားသောစသည်တို့တွင် "သင်မသိနိုင်ပါ"၊ "သင်မည်မျှနုံပါသနည်း"၊ "သင်က trolls"၊ မင်းတို့ကသူတို့နဲ့အငြင်းအခုံမလုပ်ဘူး၊ မင်းကတခြားတွေ့ဆုံမေးမြန်းသူထက်ပိုမြင့်တဲ့အခွင့်အာဏာရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်၊
ဝုန်းဒိုင်းကြဲခြင်းမဟုတ်ဘဲအငြင်းပွားမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ မေးခွန်း၏အဖြေကိုသင်မမျှော်လင့်ခဲ့ပေ
အငြင်းပွားမှုများကိုဆောင်းပါး၌ရေးထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်ကောင်းစွာသိပြီး၊ muylinux၊ blogdrake နှင့်အခြားသောဟစ်စပန်းနစ်အသိုင်းအဝိုင်းများအကြောင်းကိုရှင်းပြရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ပြောသောအရာများကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့်သင်သည် အကယ်၍ သင်သည်အကောင်းမြင်သူများဖြစ်ပါကသင်သည်ထင်ယောင်ထင်မှားများဖြင့်နေထိုင်ပြီး၎င်းတို့နှင့်အတူကောင်းမွန်စွာနေထိုင်သည်🙂သို့သော်သူတို့သည်မမှန်ပါ။
(ထို lat သည်။ Argumentum မှ) ။
၁ ။ ဆင်ခြင်တုံတရားသည်အဆိုပြုချက်ကိုသက်သေပြရန်သို့မဟုတ်သက်သေပြရန်သို့မဟုတ်အတည်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်ငြင်းဆိုခြင်းခံရသူအားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်အသုံးပြုသည်။
၃ ။ ထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်ကိစ္စတစ်ခုအပေါ်ယူထားပြီးကြောင်း resolution ကို။
rae အလွန်ကောင်းသောဖြစ်ပြီးနှစ် ဦး စလုံးစာသား၌ရှိကြ၏။
RAE၊ မင်းသိလားမသိဘူး၊ ဂုဏ်သိက္ခာသိပ်မကြီးဘူး၊ မင်းကိုဒologistနပညာရှင်ဒါမှမဟုတ်ဘာသာပြန်သူကိုမေးပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဘိဓာန်ဖြစ်သောမာရီးယားမော်လီနာတွင်ကြည့်ရှုရန်အကြံပြုပါသည်
၁ မီတာ အငြင်းအခုံသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်သည့်အရာနှင့်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှု။
၂ စာပေအလုပ်၊ ရုပ်ရှင်၊ လှုပ်ရှားမှု * အကြောင်းအရာ, ရှုပ်ထွေးသော, ဒဏ္ableာရီ, ပယောဂ, ကိစ္စ, perstasis, ဆောင်ပုဒ်, ကြံစည်မှု။ Agnition, anagnorisis, ကပ်ဘေး။
၃ * စာပေအလုပ်၏ပါဝင်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှုကိုဖော်ထုတ်ထားသောအနှစ်ချုပ်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းကိုအစတွင်ထားရမည်။
4 * သင်္ကေတသို့မဟုတ် signal ကို။
အကယ်၍ သင် ထပ်မံ၍ သွားလိုပါက၎င်း၏ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောအောက်စ်ဖို့ဒ်အဘိဓာန်ကိုသွားနိုင်သည်။
2a အကြောင်းပြချက် (သို့) အကြောင်းပြချက်များ၊ အတွေးအခေါ်၊ အပြုအမူ (သို့) သီအိုရီကိုထောက်ခံသည့်အနေဖြင့် - တရားဝင်အယူခံဝင်ခြင်းအတွက်ခိုင်လုံသောအငြင်းပွားမှုရှိသည်။
အတွေးအခေါ်စာအုပ်သို့မဟုတ်အတွေးအခေါ်အဘိဓာန်တစ်ခု (သို့မဟုတ်ယုတ္တိဗေဒတစ်ခုပင်) ပင်ဖြစ်သည်။
အငြင်းအခုံသည်ဝုိင်း ၀ န်းအပေါ် အခြေခံ၍ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုဖြင့်နိဂုံးချုပ်ရန်အဓိကထားသည်။
အငြင်းအခုံ (လက်တင်အငြင်းပွားမှုမှ) ဟူသောစကားလုံး - တစ်ခုခုကိုအမှန်တရားအဖြစ်သို့မဟုတ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောလုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်တရားမျှတရန်အကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်၊ တစ် ဦး reasoning.1 ၏ပါးစပ်သို့မဟုတ်တိကျမ်းစာ၌လာသည်စကားရပ်
နိဂုံးချုပ်သည်အငြင်းပွားမှု၏အဆုံး၊ ဝုိင်းပြီးနောက်ပြီးနောက်အဆိုပြုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁ အကယ်၍ အငြင်းအခုံမှန်ကန်ပါကဝုဏ်အတွင်းမှနိဂုံးကိုဖော်ပြလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အဆိုပြုချက်တစ်ခုနိဂုံးချုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကြံစည်မှုအတွက်နေရာ, ၎င်း၏အခန်းကဏ္ not မဟုတ်
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ RAE တွင်ပင်အကြောင်းပြချက် ပေး၍ ကျွန်ုပ်နောက်သို့လိုက်သွားသည်။ အကယ်၍ သင်၏စာသားတွင်ကျွန်ုပ်ကောက်ချက်ကိုသာတွေ့မြင်သောကြောင့်အငြင်းပွားမှုများသည်ငါ့ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ဖော်ပြသည်ကိုတွေ့လိုပါကစာပိုဒ်ကိုယ်တိုင်ကနိဂုံးချုပ်ဖြစ်သည်။
ငါပဲပြန်ဖြေခဲ့တယ်၊ RAE မှာမင်းကမင်းကိုအငြင်းပွားစရာတွေမပေးခဲ့ဘူး၊
RAE သည်အခြားသောအရာများအရအခြားဂုဏ်သတ္တိများ (ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့တာထက် ပို၍ မှန်ကန်သည်) မရှိသည်မှာအဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကော်မရှင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော်ငြားလည်းစာရေးဆရာများအားစာရေးဆရာများကိုသာပေးသည်။ တကယ်ဘာသာစကားကိုလေ့လာတယ်။ RAE ကိုဂုဏ်သိက္ခာပေးသူများအနက်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကံမကောင်းစွာသေဆုံးခဲ့ရသည့်Lázaro Carreter နှင့်သူ၏ကုလားထိုင်အား Javier Maríasကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးစကားအသုံးအနှုန်းကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ် အယ်လ်ဂိုဘန်ကျနော့်အမြင်အရဖြစ်ပျက်ပန်ဒိုရာ စီးပွားဖြစ်ပရိုဂရမ်များမရှိသည့်အကြောင်းနှင့်ထိုထက်မကသူတို့တည်ရှိရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းသူ၏အဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံရန်ဖြစ်သည် GNU / Linux များ အလိုတော်ရှိသည်အတိုင်းသူတို့ကိုပယ်ရှင်းတော်မူ၏။ အဲဒီ element က -အသုံးပြုသူများကို Linux ကို ကျနော်တို့ထိရောက်သောဖြစ်ခြင်းများအတွက်ကြိုက်တယ်သောရိုးရှင်းသောတကယ်တော့သည်- သင်၏နိဂုံးချုပ်အားလုံးကျရောက်သည်ကိုအချက်တစ်ချက်အဖြစ် ၀ င်ရောက်မည်။
သင်မှန်ပါတယ် ပန်ဒက်သင်ကဲ့သို့သောယောက်ျားများနှင့်ဆက်ဆံခြင်းသည်မထိုက်တန်ပါ။ ဤနေရာတွင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုရေးသားသောအခါဆန့်ကျင်သောအတွေးအခေါ်များကိုလက်ခံရန်ရင့်ကျက်မှုရှိသော်လည်းစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအဆင့်မှငြင်းခုံနိုင်သည့်ဉာဏ်ရည်လုံလောက်သောသူများရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်မမှားပါ။ နှင့်တူသောရိုင်းစိုင်းကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့်အတူပေမယ့်သင်ကအနက်ရောင်ဆန်ကောင်လေးဖြစ်ကြသည်။
ခင်ဗျားရဲ့ကုသပုံ အယ်လ်ဂိုဘန် အကြောင်းမှာသူသည်အရူးအမူးကဲ့သို့ပြုမူဆက်ဆံခံရသည့်အရာမဟုတ်ဘဲအငြင်းပွားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အဖြေကိုတောင်းခံရန်နှင့်လက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသောကြောင့်သူသည်သင်ပေးခဲ့သည့်အဖြေကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မျှထိုက်တန်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထိုနည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်လုံးဝမဝေဖန်ပါ၊ မွန်ဂိုစကားလုံးကိုအရိုးစွဲနေသည့်အသုံးအနှုန်းဖြင့်အသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မှန်ကန်ပုံမပေါ်သောကြောင့်၎င်းသည်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဖော်ပြရန်မဟုတ်ဘဲမွေးရာပါပြproblemနာကိုရည်ညွှန်း။ အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Alejandro como Ernesto သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပါ ၀ င်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီးသူတို့ပေးခဲ့တဲ့ကြင်နာမှုနဲ့ချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေပါ။ သူတို့နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဝမ်းနည်းပါတယ် Tina သင့်ရဲ့အဖြေကိုမမွငျခဲ့ သင်မှန်ပါတယ်
သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ငြင်းခုံခြင်းသို့မဟုတ်ဆွေးနွေးခြင်းကိုအငြင်းပွားမှုများ (သို့) ဒေတာများ သုံး၍ စကားပြောခြင်းကိုမပြုလုပ်လိုပါကကိုယ်ရေးကိုယ်တာတိုက်ခိုက်မှုသို့တိုက်ရိုက်သွားမည်ဆိုပါကတိတ်ဆိတ်စွာနေခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။
လူတို့သည်ယုတ္တိဗေဒနှင့်မှားယွင်းသောမှားယွင်းမှုများကိုသိရှိပါကအင်တာနက်ပေါ်တွင်ဆွေးနွေးခြင်းသည် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်မှန်ကန်သောဝန်းကျင်ကို အခြေခံ၍ ညှိနှိုင်း။ တသမတ်တည်းရှိသောဆွေးနွေးမှုများကိုတည်ဆောက်ရန်အထောက်အကူပြုသောကြောင့်“ ငါဘာစဉ်းစားမိခဲ့တာလဲ” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
သင့်အမှုသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ရိုင်းစိုင်းပုံမပေါက်ပါကမစိုးရိမ်ပါနှင့်။ အင်တာနက်ပေါ်ကဆွေးနွေးပွဲတွေမှာကျွန်တော်တော်တော်များများတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ငါ့ကိုသိပ်မကြောက်ဘူး၊
လူမိုက်တစ်ယောက်လိုငါမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကငါ့ကိုနင့်ကိုကြည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါ့ကိုမသိရင်ရယ်စရာပါ။ ဆွေးနွေးမှုများတွင်အသုံးပြုသောနောက်ထပ်လှည့်ကွက်များထဲမှတစ်ခုမှာ“ မင်းမသိဘူးလား” ဆိုသည့်လှောင်ပြောင်ထားသောလှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ "ကျနော့်မှာအကြံဥာဏ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီဝါကျကိုလွှတ်လိုက်ရင်ငါငြင်းခုံမှုမှလွတ်မြောက်နိုင်ပြီးစိတ်ကူးအချို့ရှိနိုင်ပါတယ်"။ အများဆုံးသူဆိုးဆိုးရွားရွားသည်သူ၏မသိဘဲပေးထားခဲ့သည်။
P.S. ဝါဂွမ်း It's
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့တောင်းပန်မှုတစ်ထောင်ကအလုပ်များလွန်းလို့ငါ့ကိုမပါခဲ့ဘူး
အခုအချက်ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် - ဘာကြောင့်စီးပွားဖြစ် application တွေမရှိတာလဲ Linux ကို? ကျနော့်အမြင်အရကြည့်ရင်တော့အဲဒါဟာအလိုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ် distro ကမှအလေးအနက်ချဉ်းကပ်မှုမျိုးမှမရှိခဲ့ပါဘူး Adobe ကဥပမာ - စီးပွားရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ရန်အဆိုပြုသည်။ အသုံးပြုသူလူနည်းစုသည်သုံးစွဲသူများကတည်းကအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ MacOSX PC အသုံးပြုသူအားလုံး၏ ၅% ထက် ပို၍ မတင်ပြပါ။
ကြီးလေးတဲ့ပြproblemနာကငါမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ Linux ကို ၎င်းသည်အလွန်လှပပြီးမြင့်မြတ်သော်ငြားလည်းလက်တွေ့ကျသောအယူအဆများနှင့်အလွန်ဆက်စပ်နေသည်။ ငါအနည်းငယ်လက်တွေ့ကျကျထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်။
ရဲစွမ်းသတ္တိငါလွန်ခဲ့သောခုနစ်လကျော်ကအထုပ်ကို update Adobe က CS4aAdobe က CS5 တစ်ယောက်စီအတွက်ဒေါ်လာ ၃၅၀ ထက်မပိုခဲ့ဘူး။ ငါပြီးပြည့်စုံသော packages များအကြောင်းပြောနေတာနေပါတယ်: Photoshop၊ Illustrator၊ Indesing တို့ ဖြစ်ပါတယ်။...
Mac အသုံးပြုသူအများစုသည် design and editing ၏သဘောသဘာဝကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည်။
ဒါကဘာမှမဆိုင်ပါဘူး Linux ကို -Mint, ဥပမာအား- စီးပွားဖြစ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ပါ Adobe က ၎င်း မှနေ၍ အသုံးပြုဆဲသန်းပေါင်းများစွာသောဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာအားလုံးကိုဆွဲဆောင်ရန်ကင်ပိန်းတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည် Windows ကို?
၎င်းသည်စျေးကွက်သစ်သို့ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူများကိုရောင်းခြင်းမဟုတ်ပါ Linux ကို
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Adobe ကပိုက်ဆံတောင်းရင်နောက်ဆုံးမှာ linux 1,4% ဖြစ်မယ်၊ linux mint ၀.၁၅% ဖြစ်ရမယ်။ ဒီ distros တွေအားလုံးကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်အမြင့်ဆုံးကိုရလိမ့်မယ်။ အားလုံးကိုငါပြောတယ်
« ... ဒါပေမယ့်အကယ်စင်စစ် Adobe ကသင်အားပိုက်ဆံတောင်းနေလိမ့်မည်»
ပန်ဒိုရာဒါကကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုပဲ မဖြစ်နိုင်ဘူး တစ်နေ့အတွက် Linux ကို စီးပွားဖြစ် applications များရှိသည်။ သူတို့သည်ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စအတွက်ပင်ဖြစ်သည်ဟုသူတို့ဆိုကြသည် ရဲစွမ်းသတ္တိ အရူးနံပါတ်ထည့်သည် -ငွေလဲနှုန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,266.66- ၏ကုန်ကျစရိတ်အဖြစ် photoshop ကို အဲဒါမမှားဘူးဆိုရင်၊ ငါပြီးပြည့်စုံတဲ့အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုစီအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅၀ ပေးရတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောပြတယ်။
« ... linux 1,4% ရှိလျှင် linux mint 0.15% ရှိရမည် "
ဒါကအခုဘာလဲ၊ အဲဒီလိုပဲဆက်နေသင့်သလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်မှောက်ကာလတိုသာဖြစ်သဖြင့်မည်မျှကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုမစဉ်းစားနိုင်ပါ။
ငါထပ်ခါတလဲလဲပြောရလျှင်၎င်းသည် hu * vos ကိစ္စသာဖြစ်ပြီးဆန္ဒမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ၁% ကျော်သွားလိမ့်မယ်လို့အနှစ်တစ်ထောင်ပြောနေကြတယ်။ ၂ ကိုမရောက်သေးဘူး။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမှာဘယ်သူမှမပါဝင်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ဟာ ၂ ရက်ကနေတစ်နေ့ကုန်သွားမယ်လို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ယုံကြည်လား။ ဒီကမ္ဘာကြီးဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ဖြစ်တယ်။ ပိုက်ဆံအပေါ်မှာအခြေခံတယ်။ လူအများစုကရုပ်မြင်သံကြားကိုလူသိရှင်ကြားမဖြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်လူအများစုကကွန်ပျူတာတွေအကြောင်းတောင်မှမသိဘူးဆိုရင်ကြီးထွားမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှရှေ့ဆက်လို့မရဘူး။ ၎င်းသည်ဥကိုမပစ်လိုက်ခြင်း၊ ၎င်းသည်ပိုက်ဆံနှင့်အခြားပိုက်ဆံများကိုပစ်ချခြင်းနှင့်အခြားသူများမှထုတ်ပေးသောပစ္စည်းများကိုအခြားသူများမပေးသည့်အရာထက် (၎င်းကိုကွဲပြားခြားနားမှု၏အပြိုင်အဆိုင်အားသာချက်ဟုခေါ်သည်) ထက် ပို၍ ရောင်းခြင်းနှင့်၎င်းကိုသင်တတ်နိုင်သည်။ မကောင်းဘူး၊ ဂူးဂဲလ်က Linux ကိုမြှင့်တင်ဖို့ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀၀ ထည့်လိုက်တဲ့နေ့မှာငါတို့အများကြီးတိုးလာလိမ့်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။
Adobe ကကျွန်တော့်အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သူတို့နှင့်သာစကားပြောပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုက်ဆံထည့်ရန်အသုံးပြုသူအကြောင်းပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော် Adobe ကိုစည်းရုံးရန်အခက်အခဲရှိသောကြောင့်နားလည်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်ပင်ရှင်းပြရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
Linux အတွက်ဂိမ်းများပြုလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းသို့ကူးပြောင်းခြင်းထက်များစွာအကျိုးရှိသည်။ ဂိမ်းတစ်ခုသည်ယူရို ၄၀.၅၀ တန်ဖိုးရှိသည်။ အကယ်၍ လူ ၃၀,၀၀၀ ၀ ယ်ပါကရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုပြန်ပေးပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလက်လှမ်းမီသောကြောင့်လူအများဝယ်ယူလိမ့်မည်။ သို့သော် Adobe photosho`p အကြောင်းပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွမ်းကျင်သောကိရိယာတစ်ခုအကြောင်းပြောကြသည်။ သမိုင်းကကွဲပြားတယ်။
"... သုံးစွဲသူသည်ငွေထည့်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော် Adobe အားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ခက်ခဲသောမေးခွန်း - နားလည်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၎င်းကိုရှင်းပြရန်မလိုအပ်ပါ။ "
ငါကန ဦး ကတည်းကနားလည်သဘောပေါက်ပေမယ့်အဲဒါကိုapriori ယူဆရန်ဖြစ်ပါသည် Adobe က ဒါဟာမျှသာပုဂ္ဂလဒိis္ဖြစ်သောထိုသို့ပြုလိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးတော့အခုထိတော့အဲဒီလိုတစ်ခုခုပြောနေတာကို distro ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှမတွေ့ရဘူး။
Linux ကို ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးမားသောအလားအလာရှိပါတယ် Adobe က စနစ်အပေါ်အလွန်တောင်းဆိုမှုများရှိနေသောကြောင့်ယင်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိုသည် MacOSX သော Windows ကို ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်အခြားအကြားကုန်ကျစရိတ်ခြားနားမှုရှိနေသော်လည်း
ယနေ့အသုံးပြုသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်နာများပါ Windows ကိုသူတို့ကတစ် ဦး မဝယ်နိုင်လို့ပဲ Appleသုံးနိုင်သည် Adobe က ကဲ့သို့တည်ငြိမ်ပြီးကြံ့ခိုင်တဲ့စနစ်ပေါ်မှာ Linux ကို သူတို့လုပ်လိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သင်သိမ်းဆည်းမယ့်အရာ Windows ကို စားသုံးသူအတွက်ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းဖြစ်သောကြောင့်သင်က၎င်းကိုအထုပ်ထဲတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်။
ဒါပေမယ့်ဒါကဥပမာတစ်ခုပဲ၊ ငါဒါကိုထည့်လိုက်တာ Adobe က ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျော်ကြားသောအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ခြင်းအပြင်ကိုယ်တိုင်ကြော်ငြာတွင်များစွာသုံးစွဲသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်လိုချင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပမာတစ်ခုပေးနိုင်သည်။ Sega။ ငါတို့ကိုတူညီတဲ့အရာဆီကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်၊ ဒါကနည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်ဖို့အလိုတော်ကိစ္စပဲ။ဒါမှမဟုတ်အများကြီး- အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏ purism မှ။
ယခုတွင်ငါသည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏အခြေအနေမှဖယ်ထုတ်ပြီး၎င်းသည်သင်နှင့်မတူဟန်တူမည်ဖြစ်သော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင်က "Linux တွင်စီးပွားဖြစ်အသုံးချပရိုဂရမ်များအဘယ်ကြောင့်မရှိသလဲ" ဟူသောသင်၏ကန ဦး မေးခွန်းကိုမဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်မြင်ရသည်။ အပြောအဆိုရှိပါကသင်၏အမြင်ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးတန်ဖိုးရှိသည့်အရာအဖြစ်သာတင်ဆက်ပြသခဲ့ပြီး၊ အချိန်ကိုမဖြုန်းတီးပါနှင့်။
လူအများစုကကွန်ပျူတာများကိုမသိဘဲ ၄ င်းတို့ကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည်ကိုသုံးသည်ကိုအမှန်အတိုင်းပဲ Linux သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ operating system ကိုအသုံးပြုရန်လူအများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ကြိုးစားခြင်းသည် Windows ထက်အားသာချက်များစွာရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျထင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်၎င်းအတွက်မည်သည့်အရာကိုမဆိုမလှူဒါန်းနိုင်ခြင်းကြောင့်အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှများများစားစားကူညီခြင်းဖြင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် ၁% ကိုသာကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ Linux အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကို Linux ကိုစတင်သုံးစွဲနိုင်လျှင် ကမ္ဘာတစ်လွှား၌မည်မျှသက်ရောက်မှုရှိမည်ကိုသင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်ပါသလား။ ၁% ကအဆတိုးမယ်။ အမှန်တရားကတော့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံကိုမသိတဲ့လူတွေအများကြီး၊ အထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုတွေပါ၊ ဒါပေမယ့်ကလေးငယ်တွေလည်းဒီကမ္ဘာကြီးကိုအစောပိုင်းထဲဝင်လာကြပြီးငါတို့ထက်ပိုပြီးသိကြမှာပါ၊ သင်လုပ်ရမှာကသူတို့ကိုသင်ပေးခြင်းဖြစ်သည် ငယ်ရွယ်စဉ်က Windows မဟုတ်ဘဲသင်၏ "ပုံမှန်" OS Linux ကိုလုပ်ပါ
ဆိုလိုတာကဒီဟာကအစုံတည်း suite ဖြစ်ပေမယ့်စျေးကအရမ်းရူးနေတာပဲ။
ဒီတစ်ခုရှိရင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်များများသုံးရတာလဲ http://www.adobe.com/products/creativesuite/design.edu.html ?
399 $ LOL, သည်အလွန်စျေးကြီးသော xD ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက် XD အတွက်ငွေမပေးရန်မလိုပါ
Tina Toledo ရဲ့မဟာမိတ်ပြုချက်ကိုကျွန်တော်သဘောတူတယ်။ ပူစီနံက ၀.၁၅% ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်မဟာမိတ်ဖွဲ့ဖို့အတွက်သူလုပ်နိုင်တာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်၊
ငါယုံကြည်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကတော့ Richard Stallman ပြောတဲ့အတိုင်းသင်ကြောက်ရွံ့နိုင်တယ်၊ အဲဒါဟာပိတ်ထားတဲ့ဆန့်ကျင်ရေးဆော့ဝဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသင်မြင်တယ်၊ ငါထပ်ခါတလဲလဲပြောရရင်ငါ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေ၊ ။
သင်၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်ဟူသောသင်၏စကားနှင့်လည်းကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။ ပရိုဂရမ်မာသည်သူ၏အလုပ်အတွက်ပေးဆောင်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းဆိုလိုသည် (အမှန်မှာ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အားသင်နှင့်အထက်တွင်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း Red Hat တွင်သို့မဟုတ် Novell ၌ပြုလုပ်သည်။ / Attachmate (သို့မဟုတ် Canonical) သည်စီးပွားဖြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်ခြားနားချက်မှာပရိုဂရမ်မာများသည်ပရိုဂရမ်မာများသည်ကုဒ်နှင့်ဖြေရှင်းချက်များကိုပေးနိုင်ပြီးအခြား application ကိုတီထွင်ရန်ကုဒ်ကိုပင်သုံးနိုင်သည်၊ သို့သော် GPL လိုင်စင်ကိုယ်တိုင်ကထိုဆော့ (ဖ်) ဝဲရေးသားသူများကိုကာကွယ်ရန် မူရင်းစာရေးဆရာများကိုရည်ညွှန်းအတင်းအကျပ်, တတိယပါတီများက code ကိုပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်မှု။
ဒါပေမယ့်ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ပေါင်းသင်းတာဟာမှားယွင်းတဲ့အယူအဆဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ပေါင်မုန့်ကိုမစားနိုင်တဲ့နာမည်ဆိုးလည်းဖြစ်တယ်။
ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ် Gimp အတွက်ငွေပေးပါသလား သိမ်းဆည်းခြင်း၊ xchat, clementine, libreoffice, scribus, netbeans နှင့် repositories တွင်ရှိသောဆော့ဖ်ဝဲ၏ 97% အတွက်သင်ပေးဆောင်ပါသလား။
လအတော်ကြာကြာမပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ nepomuk လုပ်သားလိုမျိုးဥပမာများကိုသင်မှတ်မိပါသလား။ ကုမ္ပဏီအနေနှင့်သင်အားငွေပေးချေရန်အစီအစဉ်သည်အစီအစဉ်အရမဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့မှအားသွင်းသူအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း၊ ပရိုဂရမ်အတွက်အသုံးပြုသူအားရိုးရှင်းပြီးရိုးရှင်းသောအားဖြင့်ငွေကောက်ခံရန်လိုသည်။ မင်းမမြင်ချင်ဘူး လူတိုင်း Novell၊ Canonical နှင့် Red Hat တို့တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်မဟုတ်။
ဒါပေမယ့်သင်ကသူတို့အတွက်အလုပ်မလုပ်ရင်တောင် GPL အောက်မှာလိုင်စင်ရရင်တောင်သင်တီထွင်ထားတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲအတွက်အားမသွင်းနိုင်အောင်ဘာကတားဆီးမလဲ။
၎င်းသည်အလွန်လေးလံပြီးအလွန်လေးလံသည်၊ ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲအားကျွန်ုပ်ငွေချေနိုင်သည်။ ရှင်းပါသည်၊ သို့သော်အခြားတစ်လုံးရောင်းလိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်ကိုနားလည်ပါသလား။ ဒါရုံပါပဲ။
စကားမစပ်ငါ Esmorga နှင့်အတူလုံးဝနှင့်လုံးဝသဘောတူသည်။
«ဘ ၀ တွင်အကောင်းဆုံးအရာများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်
မှကောက်နုတ်ချက် ပိုက်ဆံ (ဒါငါလိုချင်တာပဲ)
ဒါဟာကမ္ဘာကြီးထဲမှာအလွန်ဘုံဖြစ်ပါတယ် GNU / Linux များ မေးခွန်းထသောအခါ အဘယ်ကြောင့် Linux တွင်စီးပွားဖြစ် application များမရှိသနည်း။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလိပ်စာနှင့်၎င်း၏မရေမတွက်နိုင်သောအားသာချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကန ဦး မေးခွန်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ကြပါစို့အဘယ်ကြောင့် Linux တွင်စီးပွားဖြစ် application များမရှိသနည်း။- ထိုလမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သောလမ်းတစ်လျှောက်ထွက်ပေါက်ကိုရှာရန်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
1.-GNU / Linux အသုံးပြုသူများသည် PC အသုံးပြုသူအားလုံး၏ ၁% ထက်အနည်းငယ်မျှသာရှိသောကြောင့်စီးပွားဖြစ်စီးပွားဖြစ်အသုံးမပြုပါ။
ဒါကတစ်ဝက်အမှန်တရားပါ။ လက်ရှိစာရင်းဇယားများအရ၎င်းသည်အဟန့်အတားမဟုတ်ကြောင်းပြသသော်လည်းတိုင်းတာသင့်သည်မှာအသုံးပြုသူမည်မျှဖြစ်သည်။ Windows ကို ပြောင်းရွှေ့ချင်တယ် GNU / Linux များ သူတို့အလုပ်လုပ်သောကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုသောဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းကိုသူတို့မလုပ်ပါ GNU / Linux များ
Adobe က အသုံးပြုသူအများစုကအလောင်းအစားပြုလုပ်နေသည့်နေရာကိုမရရှိနိုင်ပါ Windows ကို ဒါပေမယ့်အသုံးပြုသူများ၏, ထို့နောက်, လူနည်းစု Apple ကပါ Macintoshသဘောထားကွဲလွဲမှုများကြားမှနှစ်များတစ်လျှောက်သူ၏သစ္စာရှိဖောက်သည်များဖြစ်လာသည် Apple y Adobe က နှင့်ငါတို့ရိုးသားရမယ်, ယနေ့ကွန်ပျူတာများ၏ Apple ဒီဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်သူတို့ဟာ non-linear ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ဂရပ်ဖစ်အနုပညာအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာတွေထဲကတစ်ခုအဖြစ်နာမည်ကောင်းရခဲ့သည်။
ဒါကလုံးဝမမှန်ပါဘူး ထိုကဲ့သို့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရပ်တန့်သည်အဘယ်သူ၏ကြီးမြတ်အခမဲ့ software ကိုအဆိုပြုချက်ရှိပါတယ် GIMP y ပွင့်လင်းရုံး ဥပမာအားဖြင့်မဟုတ်၏တည်ရှိမှုအားဖြင့် photoshop ကို y MS Office ဒါပေမယ့်အစားအရင်းအမြစ်များမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်ထို့နောက်မဟုတ်ပါဘူး «တည်ရှိမှု ... » ဒါပေမယ့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ developer တွေအတွက်စစ်မှန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအထောက်အပံ့မရှိခြင်း။
စာရင်းအင်းများမရှိသော်လည်းသုံးစွဲသူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်သေချာသည် GNU / Linux များ သူတို့ရဲ့ဘဝမှာအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုအသည်းအသန်ခုခံကာကွယ်သူတွေကတစ်ပြားတစ်ချပ်လှူဒါန်းခဲ့တယ်။ လူအများပြောကြလိမ့်မည် "ကောင်းပြီ ... ငါပရိုဂရမ်ကိုသုံးပြီးပူးပေါင်းပါမယ်။ ဒါကအရမ်းတော်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အစမှာငါသီဆိုခဲ့တဲ့သီချင်းအပိုင်းအစအရ “ ဘဝမှာအကောင်းဆုံးအရာတွေကအခမဲ့ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုငှက်တွေနဲ့ပျားတွေကိုထားခဲ့ပါ၊ ငါ့ကိုပိုက်ဆံပေးလိုက်ပါ၊ အဲဒါငါလိုချင်တာပဲ။ မင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကငါကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါကုဒ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းရှိမရှိ, လက်တွေ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်, ငါစိတ်ဝင်စားမဟုတ်ပါ Adobe က Photoshop ကိုပထမတော့ဘာလုပ်ရမှန်းတောင်မသိဘူး၊ ဒုတိယကတော့အဲဒါကိုလုပ်ဖို့စိတ်မ ၀ င်စားတဲ့အတွက်အဲဒါကိုပြုပြင်မွမ်းမံဖို့သုံးလိုက်တယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တွေးမိသည်မှာ၎င်းတို့အသုံးပြုသောဆော့ဖ်ဝဲသည် ၄ ​​င်းတို့ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့လိုအပ်သည်ကိုလုပ်ခြင်းသည်အဓိကပြPCနာတစ်ခုဖြစ်သည်မှာစိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ ?
3.-GNU / Linux သည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏အတွေးအခေါ်ကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုစုဆောင်းရန်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်မှာကြီးမားသောလက်ဝါးကြီးအုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆိုလျှင်၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကိုလက်ခံခြင်းနှင့်မကိုက်ညီပါ။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သဘောတူသည့်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်စည်းမျဉ်းများမဖန်တီးပါကလက်တွေ့ကျကျအဆုံးသတ်နိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်းအနည်းဆုံးအားဖြင့် developer များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်လည်ရရှိရန်နှင့်သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုအတွင်းအမြတ်အစွန်းရရှိမှုကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကုမ္ပဏီများမှ Apple ကမိုက်ကရိုဆော့ဖ y Adobe က သူတို့ဟာဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ထင်တဲ့အတိုင်းအတာအထိ။ အရာအားလုံးပုပ်နေသည်ဟုထင်ရန်ဤအစွန်းရောက်မှု ဒိန်းမတ်၊ ၎င်းသည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစွာကိုပုံတူပွားရန်ခွင့်မပြုပါ၊ ၎င်းမှာအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်၏အကဲဖြတ်မှုများကို ပိုမို၍ အမိန့်ပေးပြီးသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ငါအပေါ်ခေါင်းစဉ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးသည့်အခါ GIMP ငါကနေထားသောစာပိုဒ်တိုများကိုးကားခြင်းဖြင့်ဖွင့်လှစ် Rudyard Kipling: “ ရိုးသားတဲ့ကျွန်ခြောက်ယောက်ကကျွန်မဘယ်လောက်သိတယ်ဆိုတာသင်ပေးတယ်။ သူတို့နာမည်တွေက ဘယ်လို၊ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်လဲ၊ y ဘာကွောငျ့။ " ငါထင်တာကတော့အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲမှာ "what" နဲ့ "why" ဟာအရမ်းရှင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် "how"
4.-စီးပွားဖြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အလွန်စျေးကြီးလွန်းသဖြင့်မွန်ဂိုများမှသာယင်းကိုပေးလိမ့်မည်
ပထမတစ်ခုအနေနှင့်၊ လူမိုက်၏ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်အမျိုးမျိုးရှိသောလူအုပ်စု၏အခြေအနေကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုရန်လုံးလုံးလျားလျားလေးစားမှုမရှိဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ မည်သူမဆိုလုပ်သင့်သည်မှာတောင်းပန်ခြင်းဖြစ်သည်။
အရာဝတ္ထုအတွင်းမှာရှိပြီးသားအရာတွေရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ် GNU / Linux များ သူတို့ဟာအမှန်တရားတစ်ဝက်၊ လိမ်လည်မှုတွေဖြစ်တယ်၊ အဲဒါဟာရည်ရွယ်ထားတာပေါ်မူတည်တယ်၊ တစ်ခုကတော့စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲကအရမ်းစျေးကြီးတယ်။
ဒါကလိမ်ညာမှုပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာငါပြမယ်။ ဈေးအကြီးဆုံးအစီအစဉ်တွေထဲကတစ်ခုကကမ်းလှမ်းထားတာသေချာတယ် Adobe က... အနည်းဆုံးအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုကာကွယ်သူများကမူ nauseam ကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုကြသည်။သူတို့ထဲကအများစုဟာ- မင်းဘဝမှာဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုခုသုံးဖူးတယ် Adobe က ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးအမြတ်အချိုးကိုအကဲဖြတ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။
ဒါပေမယ့်ထို့အပြင်သူတို့သည်မသိဘဲသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်, ထိုအချက်ကိုချန်လှပ် Adobe က အစီအစဉ်များကိုကျောင်းသားများနှင့်ဆရာများ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၅၀) ကိုသူတို့၏စီးပွားဖြစ်တန်ဖိုးနိမ့်သောဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပြီးဖြစ်ရပ်များစွာတွင်ပင်သူတို့ကိုပေးသည်။
ယခုငါသဘောတူသည်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး မှပေးသောအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၉၀၀ သည်ငွေအမြောက်အများရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ သို့သော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်အခွန်များမှနုတ်ယူထားသဖြင့်၎င်းကိုကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်မသတ်မှတ်ထားပါ။
အကြှနျုပျ၏နိဂုံးချုပ်: စီးပွားဖြစ် software များပါဝင် Linux ကို ၎င်းသည် "လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားခြင်း" ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်လုံးဝသက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ဘဲအစွန်းရောက်သောကိစ္စရပ်များတွင်၊ GNU / Linux များ နှင့်ဤ "လက်ဝါးကြီးအုပ်" ရှုံးနိမ့်ဖို့ကြီးစွာသောရန်သူအဖြစ်ရှုမြင်သည်သူ၏အသုံးပြုသူအများစု။ ကောင်းကျိုးနှင့်ကောင်းကျိုးများကိုဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျသုံးသပ်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးမှအပြန်အလှန်ချဉ်းကပ်မှုရှိပါကအခြားအရာတစ်ခုရှိသည်။ ဤအတောအတွင်းပျောက်ဆုံးနေသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်သင်အလိုရှိသည်ဟူသောအရာဖြစ်သည်။
ငါသည်လည်းသူတို့၏ဗားရှင်းသည်အဘယ်အရာကိုကြည့်ရှုရန် Adobe ဆက်သွယ်ပြီးဤရှည်လျားသောဆွေးနွေးမှုကိုပိတ်လိုက်သည်
ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖွင့်ပြီးအခြားရှုထောင့်တွေမရှိဘူးလို့မင်းမျှော်လင့်သလား။ ခင်ဗျား၊ ခင်ဗျားဆောင်းပါးကိုမင်းခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့မေးခွန်းဟာမင်းရဲ့အမြင်ကိုမြှင့်တင်ဖို့အတွက်အပြောအဆိုတစ်ခုအနေနဲ့သာဖြစ်ခဲ့ရင်၊ အဲဒါကိုပြောပြီးငါ့ထင်မြင်ချက်ကိုမစွန့်လွှတ်ဘူးလို့ငါ့ကိုယုံကြည်ဖို့မလုံလောက်ဘူး။ နှင့်တိုင်ပင် Adobe က။ ဒါပေမယ့်ငါတို့အားလုံးစဉ်းစားရန်ပွင့်လင်းသောမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်လျှင်အခြားသူများက၎င်းကိုသင့်အားအဘယ်ကြောင့်နှောင့်ယှက်ရသနည်း Amilcar, av လဗာ သို့မဟုတ်ငါသင်ထင်။ မင်းရဲ့နားလည်မှုကိုငါအဲဒီလိုလုပ်လိုက်တယ် "ငါသည်သူတို့၏ဗားရှင်းကဘာလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ Adobe ကဆက်သွယ်ပြီးပါပြီ။
ကအဖြစ်ဘယ်မှာ: «အဖြစ် Amilcar၊ Elav သို့မဟုတ်ငါကိုယ်တိုင်သင်ထင်သည်»
ဒါဟာအဖြစ်သင့်ပါတယ်: «အဖြစ် Amilcar၊ Elav ဒါမှမဟုတ်ငါကိုယ်တိုင်မင်းထက်ကွဲပြားတယ်လို့ထင်တယ်»
သင်ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်း၊ သင်သည်သင်၏လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အညီလွတ်လပ်စွာအနက်ဖွင့်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင်လွဲမှားစွာအနက်ဖွင့်ဆိုခဲ့သော်လည်းသင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းသို့မဟုတ်ယင်းကိုရှင်းပြရန်ငါမသွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၌လုပ်စရာကောင်းသောအရာများရှိသည်။
များစွာသောအရာများသည်ယခုမှ စ၍ ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။
ဒေါ်လာ ၂၅ တန်ကွန်ပျူတာမှာ Linux နဲ့ပါ
အကောင်းဆုံး Linux mini-distribution များ